Ilhaan Cumar oo hab cusub ugu soo rogaal celisay Trump - BBC News Somali
Ilhan Cumar oo uu madaxweyne Trump ugu baaqay inay iscasisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongres-ka ayaa saacado kadib ka jawaabtay hadalki Trump.
"Waxaad la timid naceyb waligaaba kuugu jirtay oo aad u qabto Yuhuuda, Muslimiinta, muhaajiriinta, dadka madowga iyo dadka loogu yimid Mareykanka, waxaan wax ka bartay dad hadalkeygu uu noolashoodu saameeyay ee adigu gormaad wax ka baran?". Sidaasi waxaa barteeda Twitter-ka ku qortay Ilhaan Cumar.
Ilhan ayaa sidoo kale aad uga soo hor jeedsatay nin uu madaxweyne Trump u magacaabay in uu noqdo ergeyga u qaabilsan dalka Venazuela. Waxay su'aal gelisay sida loo aamini karo Elliott Abrams oo loo magacaabay dalka Venazuela oo qalalaaso siyaasadeed ay ka taagan yihiin.
Elliott Abrams oo horyimid guddiga arrimaha dibadda ee Kongres-ka oo Ilhaan ay ka tirsan tahay ayaa waxay sheegtay in aysan garaneyn sababta guddigaasi iyo shacabka Mareykanka ba ay u aamini karaan ninkan, madaama bay tiri uu horay ugu lug lahaa dhibaatooyin ka dhacay dalka Elsalvador oo horay ay uga dhaceen dagaalo sokeeye iyo arrimo la xiriira dalka Iraan.
Elliott Abrams oo ah diblomaasi rug cadaa ah, aadna looga ixtiraamo Mareykanka horay na ula soo shaqeeyay madaxweynayaasha kala ah Ronald Reagan iyo George W. Bush ayaa u muuqday nin ka xanaaqay hadaladii Ilhaan Cumar.
"Sannadkii 1991 waxaad qiratay in laba mar aad aqalka Kongreska ka qarisay maclumaad la xiriira ku lug lahaanshahaada fadeexaddii Iraan, mana garanayo sababto caddeyn walba oo aad maanta bixiiso ay run ku noqon karto". Sidaasi waxaa Elliott Abrams u sheegay Ilhaan Cumar.
Hadalka Ilhan Cumar ayaa waxaa aad uga xanaaqay dadka ay ku weyntahay Yuhuudnimada
Madaxweyne Trump oo siyaasadihiisu aysan la dhacsaneyn Ilhaan ayaa maalin kahor sheegay in Yuhuud naceybka aysan melnana uga banaaneyn Maraykanka.
Muranka hadda taagan ayaa yimid kadib markii lhaan Cumar ay sheegtay in xildhibanaada aqalka Kongreska ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi ay raali geli ka dalbato Ilhaan Cumar.
Ilhaan ayaa u muuqato qof aad uga soo horjeeda qorsha walba oo uu madaxweyne Trump damac sanyahay, waxaase aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto arrintan, maadaama Ilhaan ay ka tirsan tahay guddiga arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ah mid si gooni ah u taabaneysa siyaasadha Trump iyo xulafadiisa.
Ciidanka la neceb yahay "waxay iga siibeen ilkaha"
Dalka afaraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbax wayn uu ka dhacay